Amanqaku kaBreena Fain Martech Zone |
Amanqaku ngu UBreena Fain
UBreena Fain yingcali ye-PR kunye neNtengiso eFormstack, umakhi weefom kwi-Intanethi oye wakhokela ekudaleni, ekulawuleni nasekusingatheni iifom ezikwi-Intanethi. IFomstack ibonelela ngamashishini kuzo zonke iintlobo kunye nobukhulu isixhobo ekulula ukusisebenzisa sokwakha iifom ukuqokelela kunye nokulawula idatha. Abasebenzisi banokufaka ngqo iifom kwiwebhusayithi yabo ukuze babambe ngokukhawuleza. Olu hlobo lokuguquguquka lwenza ukuba imibutho, ngakumbi amashishini amancinci, enze lula umjikelo wayo wentengiso ngelixa isandisa izixhobo zayo.
NgoLwesibini, Julayi 17, 2012 NgoLwesibini, Julayi 17, 2012 UBreena Fain
Uninzi lweenkampani zijonga inkcubeko yazo kwinqanaba elikhulu, zigubungela umbutho uphela. Nangona kunjalo, kubalulekile ukufaka inkcubeko echaziweyo yombutho wakho kuyo yonke imisebenzi yangaphakathi, kubandakanya neqela lakho lentengiso. Ayisihambisi kuphela izicwangciso zakho kunye neenjongo zenkampani yakho, kodwa ibeka umgangatho kwamanye amasebe ukuba alandele ngokufanelekileyo. Nazi iindlela ezimbalwa isicwangciso-qhinga sentengiso esingabonakalisa inkcubeko yombutho wakho xa iyonke: 1. Chonga inkokheli yenkcubeko.